Sarsar igu bannaanaa
Gabaygan waxaan kasoo uruuriyey ilo ay ka mid yihiin cajalad uu duubay Yuusuf Colaad, Maxamuud Cabdullaahi Ciise (Singub) iyo kuow kale.
Anigoo qayb gabayga ka mid ah mar hore ka qoray cajalad uu duubay Yuusuf Colaad, ayaan waxaan billowgii 2005tii socdaal ku tagay magaalada Minneapolis, Maraykanka. Bacadle Soomaalidu dukaamo badan ku leedahay ayaan aniga iyo nin saaxiibkay ahi gaadhnay. Dhawr dukaan kolkii aan dhaafnay ayaan waxaan ku leexanay makhaayad shaaha laga cabo. Waxaanu makhaayadaa kula kulanay Maxamuud-singub oo shax miis dushii ku ciyaaraya. Cabbaar markaanu ag fadhinay, aadna uu nooga qosliyey ayaa wsaxaanu weydiinay "abwaan bal wax noo sheeg?"
oo uu Raage Ugaas tiriyey
Gabaygan wuxuu abwaanku ka tiriyey geeridii walaalkii Ugaas Xuseen. Isaga oo Qoraxeey jooga oo reer uu gabadh ka qabay ina la yaal u ah, ayuu cuntadii diiday oo uu mar qudheeta goosan kari waayey. Gabadhii uu qabay oo Xaddiyo Nuur Yey la odhan jiray ayaa aabaheed u tagtay oo ku tidhi ninkii waxna iima sheegayo dheeftiina diid. Dadkii horre wax garasho iyo fahmo badan ayey ahaayeene, odaygii gabadha dhalay ayaa gartay in meesha wax ku jiraan oo uu Raage wax tabanayo. Gabadhii buu dabadeed wuxuu ku yidhi, haddaynine, kolba toosiyoo, isagaa hadli doonee wuxuu ku hadlo iisoo sheeg. Gabadhii baa aqalkedii kusoo noqotay oo taladii abaheed yeeshay. Markii u dambaysay ayuu fadhiistay oo uu yidhi:
Saldhadaan fadhiyey Faaraxow, la iga soo saarye
Salka inuusan dhigin baa, adduun laga sugaayaaye
Sidii surayo neef qali ayaan, suuqa taagnahaye
Haddaan geed siyaab looga dhigin, saar ma joogsado e
Suhra ma arko labadii indhood, nimay saruurmeene
Shir sasabane guul saadambe ah, amase saakuuna
Suxulkaa ka soo leef markuu, badowgu sooyaamo
Raggii kala sabaalayn jiriyo, sayncaddaa madhaye
Salaad loo danleeyahay ma ogi, si aan idhaahdaaye
Anba saatan inay duniyi noqon, saabka kuma hayne
Gablan samo adduun waa waxaan, kor u siyaadayne
Sidka geelu waa labiyo toban, seben dhammaantiise
Sacna caanihii waa intuu, sabadku buuxaaye
Adhina waa sadqee lagama helo, seedda joomaha'e
Sanduuqaan miftaaxii lahayn, waa surduban jaane
Birta haddii uu soofuhu ka lumo, saawir bay noqone
Gobannimo raggii sare ka tegey, waa siraad dameye
Sooraale aar baa dhufsaday, sararihii Nuure
Saratoosiyaa Aadan cunay, siqigii dheeraaye
Soonkii kal horre Yuusuf baan, siigadii dhigaye
San yaraan hagoogtiisa siday, laba sabaanoode
Sahal bay ahaayeen raggaan, saa u leeyahaye
Maantaa salaankii u jabay, Samatar Fooljeexe
Sarsar igu bannaanaa mus iyo, sud igu deyrrayde
Nin sirsiraad ka damay wuxuu shitaa, sooma xaabadiye
Soo jeedahaan ku hurdi jiray, sulubkii geeryooye
Wax badan baa siddii siiqa webi, saa naloo wadaye
Boqorkaan saf iyo fara lahayn, waa sakaar adhiye
Dhaaxaan salaamiyo ahayn, saafi nabadeede
Sabca saynabkii Adariyo, timirtii reer Saaxil
Burka iyo sareenkaad ku dubi, saanta dabadeeda
Sudna igama gelin dhuunigaad, soo dey leedahaye
Sengihii xiniiyaha la jaray, yaan sidii ahaye
Sikac oo igala baydh, soo noqnoqodkaaga
Iga seexo surin layhayo, yaan seedi kaa gu'ine
Ha i siinin soortii shiflaa, lagu sadaadaaye
Ama saadanimadii haween, saacadba i toosi
Gabadhii baa gabaygii xafidday oo abaheed siddii uu Raage u yidhi ugu marisay. Odaygii ayaa markiiba fahmay dhiilada so korodhay oo yidhi Ugaas Xuseen baa geeriyoodayee sahay, sibraar caano ah, sibraar biyo ah, iyo farasba ha loo diyaariyo Raage. Siddii baa la yeelay oo Raage ugu amba baxay tacsidii ugaaska.
Tacsidii ayuu kuu daahay Raage markaasuu is yidhi amay qoladii aad xididka ahaydeen ku tiigsadaan amaba u maleeyaan inaad isaga tashatay oodanba soo socon. Gabaygan kale ayuu haddaba goobtii uu joogay kasoo diray
Muli kuyan lawaashida cad iyo, laashinka adduunka
Lama ooyin laanqeyr sideed, laysku wada laabay
Anoon kuna ladayn kuna lulmoon, laab siraad ololka
Sheekhyadu lamaadiye sidaan, leyl u yuururaye
Raggii lumay libaaxdii go'diyo, nimankii leexeeyey
Lurkay iga hayeen baa i galay, sida dab laydheede
Umad baan lalabaheed ku jiray, tabar lihiinkeye
Wuu kugu laclaafuu is odhan, laqankii Ciideede
Lugta iyo haddii aanan ka jabin, lowga iyo dhaadka
Marna inaan kaa laabaneyn, igaga laab riixo
Soo raadi gabayadan iyo kuwa kale ee Raage